Ny fandresena dia tsy fandreseko irery fa fandresen’ny Malagasy iray manontolo.
Nisafidy ny vina mitondra mankany amin’ny ambompo-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ary ny fandrosoana ny safidy nasehon’ny malagasy fa tsy safidina kandidà fotsiny ihany.
Fotoana izao hanovantsika ny tantaran’i Madagasikara ary hampandrosaontsika ity firenena malalantsika ity.
Tsy haiko ny tsy hisaotra ny mpifaninana tamiko, Atoa Marc Ravalomanana izay niarahaba ahy androany, tetsy amin’ny lapan’ny fitsarana Ambohidahy, rehefa vita ny fanehoan’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana ny safidin’ny vahoaka Malagasy
Ilaina ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika mba hisian’ny tena fampandrosoana aingana sy maharitra eto amin’ny firenena.
Endrika vaovao no hasehontsika manomboka izao eo imason’izao tontolo izao arak’ila filamatra napetrantsika hoe “mba ho lohany, mba ho sangany ary mba ho maodely aty Afrika i Madagasikara”
Ho filohan’ny Malagasy iray manontolo aho, na ireo nifidy ahy na ireo nifidy ny mpifaninana tamiko satria ny fampandrosoana hoentiko dia fampandrosoana ho an’ny Malagasy tsy ankanavaka, ho entina isam-paritra, hipaka any amin’ny distrika, ary miantefa sy miantraika amin’ny isam-pokontany.
Misaotra ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana aho sy ireo mpikambana rehetra ao aminy izay nanao ny asany tao anatin’ny mahamatianina sy manarapenitra satria araka ny nolazainy teo dia natao ny fijerena ny antontan-taratasy tsirairay avy, ny PV tsirairay avy manerana an’i Madagasikara. Mazava ny fandresena ry Malagasy ary hisaorana ny HCC izany.
Misaotra ihany koa ny CENI, fa indrindra misaotra ny Malagasy rehetra nandray anjara tamin’iny fanomanana ny fifidianana iny. Misaotra anareo rehetra aho nahatoky ahy, nahatoky ny vina natolotro, mbola mahatoky ny hoavy mamirapiratra ho an’ny Madagasikara.
Fa misaotra indrindra ireo olona marobe, aman’aliny, aman-hetsiny izay nanohana ahy nandritra izay làlana nodiaviko izay. Niray fo, niray saina, niray làlana. Misaotra anareo aho, namana rehetra rehetra : mpikambana ao anatin’ny antoko, mpanao gazety, ny Association, ny solombavambahoaka sy ny maro tsy ho voatanisa. Ianareo namana rehetra izay nahatonga izao fandresena izao.
Efa nolazaiko ombieny ombieny fa tsy haiko ny tsy hisaotra ny akaikin’ny foko, dia ny vady malalako izay teo anilako mandrakariva, nanolo-tsaina, niaraka niaritra ny mafy, niaraka nisedra ny làlana izay nodiavina nandritra izay taona maro izay.
Misaotra an’izy telo dahy koa aho, Arena, Ilo, Ilona izay tamin’ny fotoan’androny dia nanontany ahy hoe “ Dadàh, fa maninona ianao no mbola hanao politika ?” Dia hoy aho tamin’izy ireo hoe : “ny fanaovana politika dia, tamin’ny andron tany aoriana tany, rehefa misy manafika ny firenena iray ka feno taona ny vatan-dehilahy, 18 taona, dia tsy maintsy mandray ny tandrify azy mba hiarovana ny fireneny. Ohatran’izay koa ny dokotera. Rehefa misy marary ohatra ny any anatin’ny raopilanina, ka n’inoninona aretin’ny olona mitranga ao, ka miantso ny mpanamory hoe iza no dokotera ato anatin’ny raopilanina dia tsy maintsy mijoro izy hamonjy sy hanavotra ilay olona marary” Ny noteneniko tamin’izy mianadahy dia ny hoe “nahare ny antson’ny anjomara aho hanavotra ny firenena, hanavotra an’i Madagasikara ary tsy maintsy mamaly an’izany antso izany”.
Nanomboka teo dia niray fo izahay dimy mianaka. Nanampy ahy ry zareo, anisan’ny nahatonga izao fandresena izao ka misaotra anareo telo dahy aho ary misaotra an’i Mialy ihany koa.
Rehefa nitety an’i Madagasikara aho dia tsapako ny fahantrana lalina iaianan’ny malagasy isan-tokatrano. Nefa na dia sarotra aza ny fiainana iainan’ny besinimaro dia hitako misoritra eny amin’ny endriky ny isam-batanon’olona ny fanantenana sy ny fiandrandrana hoavy mamiratra...
Ankehitriny dia hiposaka ny masoandro hanome tara-pahazavana hoan’ny Malagasy ary hahazo ny anjara masoandrony ny isan-tokatrano. Hiasa mafy aho mba hahita ny fampandrosoana ny isan-tokantrano manerana an’i Madagasikara
Noho izany dia pejy vaovao no misokatra eo amin’ny tanataran’ny firenena, eo amin’ny tantaran’i Madagasikara ankehitriny .
Mankasitraka anareo rehetra nanaraka ny toromarika izay nampitaiko taminareo ny hoe “n’aiza n’aiza misy anao dia ataovy izay afaka ataonao amin’izay eo ampelantananao”. Dia notanterahanareo izany. Tsapako ny ezaka nataonareo tsirairay avy, tsapako ny fitiavanareo, ny fitiavanareo ahy, ny fitiavanareo tanidrazana ary noporofoinareo izany tao anatin’ny fampielezan-kevitra izay niarahantsika nanao sy nanatanteraka.
Betsaka ny zavatra nanamarika iny fampielezan-kevitra iny fa ny nanamarika ahy manokana dia ilay Nenibe 85 taona tany Vavatenina, nandeha an-tongotra nandritra ny ora maro, nadeha tanimbary, ary tazako alavitra dia nantsoiko hoe “Bebe, avia ianao miakatra eto”, dia nomeko azy ny “micro”. “Bebe, inona no andrasanao amiko ? Inona no fanirinao ?” Di ahoy izy hoe : “Président, alohan’ny hikipian’ny masoko dia avoty ny Malagasy, avoty i Madagasikara”.
Mitodika manokana aminy aho ankehitriny hoe : Bebe, vita ny dingana voalohany. Lany filoham-pirenena ny zafikelinao Andry Rajoelina ary hanavotra an’i Madagasikara izy ary tsy maintsy ho avotra ny Malagasy”
Ho filoha mendrika ny Malagasy aho. Hampitambatra sy hampiray fo, hampiray saina ny Malagasy rehetra ary misaotra antsika rehetra. Ary hampanjakantsika ilay hoe “Fa ny fitiavana no lehibe indrindra”.